Waa sidee xaaladda dhaawac ee Salah, Robertson, Matip, Gomez & Shaqiri ka hor kulanka ay Sabtida ciyaareyso Kooxdooda Liverpool ee Premier League? – Gool FM
(London) 21 Nof 2019. Labada ciyaaryahan ee Kooxda Liverpool, Mohamed Salah iyo Andrew Robertson ayaa la soo warinayaa inay qarka u saaran yahay inay dhaawacyo ku seegaan kulanka Sabtida ee Premier League.
Shabakadda Sky Sports ayaa warinaysa in Mohamed Salah iyo Andrew Robertson laga yaabo inay ka maqnaadaan Kooxdooda Reds kulanka ay Sabtida booqanayaan Crystal Palace ee Premier League kaddib markii ay ka soo kabsan waayeen dhaawacyo dhanka canqowga ah.
Labadaan ciyaaryahan ayaa laga saaray liiska xulalkooda qaranka kaddib markii ay dhaawacyo la kulmeen, laakiin waxa ay u muuqataa in kulanka ay Kooxdooda Liverpool u safreyso Sabtida garoonka Selhurst Park inuu hoosta ka soo galay oo uu aad deg deg ugu yahay, isla markaana ay seegi doonaan.
Tababare Jurgen Klopp ayaa sidoo kale dharbaaxo dheeri ah la kulmaya kaddib markii la sheegay in Joel Matip ay macquul tahay inuu isaguna seego kulankan.
Ma uusan ciyaarin tan iyo kulankii ay barbaraha la galeen Manchester United bil ka hor, welina kama uusan kabsan dhaawacii ka gaaray jilibka.
Liverpool ayaase ku rajo weyn inuu ciyaari doono oo uu taam noqon doono Joe Gomez kaddib markii uu dhaawac jilibka ah ku seegay kulankii xulkiisa qaranka England uu guusha ka gaaray Kosovo Axaddii.
Si kastaba ha ahaatee, warka u wanaagsan oo ay helaan hoggaamiyaasha horyaalka Premier League ayaa ah in Xherdan Shaqiri uu ku soo laabtay tababarka kaddib markii uu ku maqnaa dhaawac kubka ah labadii bilood ee la soo dhaafay.